एमिलियो लारा। सपनाहरु को प्रहरी को साथ साक्षात्कार | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 13/10/2021 12:00 | साक्षात्कार, लेखकहरू
Emilio lara यस बर्ष प्रकाशित भएको छ सपनाहरु को प्रहरी, उनको पछिल्लो उपन्यास। लेखक jiennense ऐतिहासिक विधा को धन्यवाद को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक भएको छ अजेय Armada को भाईचारा, प्युर्टा डेल सोलमा घडी निर्माता o आशा को समय. म तपाइँको दया को लागी र यस को लागी एक ठाउँ खोज्न को लागी धेरै धेरै धन्यवाद साक्षात्कार जहाँ उसले हामीलाई सबै कुराको बारेमा थोरै बताउँछ।
Emilio लारा - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: तपाइँको उपन्यास को शीर्षक हो सपनाहरु को प्रहरी। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
EMILIO लारा: साहित्यिक ट्रिगर हो शुभंकर हत्या को रूप मा चाँडै अंग्रेजी द्वारा गरीएको दोस्रो विश्व युद्ध। सेप्टेम्बर १ 1939 ३ of को पहिलो दस दिन को दौरान, ,800.000००,००० भन्दा धेरै बिरालाहरु र कुकुरहरु euthanized थिए। जोगिन, यदि जर्मनहरु लन्डन र अन्य शहरहरु मा बम विष्फोट भयो र जनावरहरु का मालिकहरु मारिए वा घाइते भए, घरपालुवा जनावर असहाय हो। क थियो सामूहिक बलिदान प्रेम बाट प्रेरित, यद्यपि यो विरोधाभासी छ। मैले भेटें ऐतिहासिक घटना एक आइतवार पूरक मा एक रिपोर्ट पढ्दै, र मैले महसुस गरे कि एक थियो कथाहरु भावनाले भरिएको। मेरो उपन्यास यसरी सुरु हुन्छ।
दि: यो एक थियो प्रचुर हास्य पाठक, र मैले पढेको पहिलो किताब थियो प्लेटो र म, र को साहसिक उपन्यासहरु पनि जुल्स भेर्न, एक लेखक जो मलाई मोहित जब म EGB पढ्दै थिएँ।
दि: म अझै Miguel को बारे मा उत्साहित छु डेलीब्स र vlvaro Cunqueiro। समयको साथ, अरु सामेल भएका छन्: फिलिप रोथ, रबर्ट लास, गार्सिया Mquerquez, वर्गास Llosa, जुआन स्लाव गालान, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे...
दि: को त्रयी को कुनै हिलारी Mantel बारेमा हेनरी आठौं.
दि: मँ त्यसमा अजीब छैन। मलाईaमा पढ्न मन पर्छ आर्मचेयर, राम्रो प्राकृतिक वा कृत्रिम प्रकाश संग। म मेरो कार्यालयमा लेख्छु कम्प्युटरमा, र लिईयो हात नोट नोटबुकमा। म धेरै पढ्छु र लेख्छु किनभने म मेरो समय व्यवस्थित गर्दछु र म यसलाई बकवास मा बर्बाद नगर्ने कोसिस गर्छु।
दि: मैले पहिले भनेको छु कि म मेरो कार्यालय मा लेख्न मन पराउँछु, जहाँ म संग कम्प्यूटर छ र एक शान्त वातावरण पाउँछु। मसँग कसरी छ अमूर्त गर्न को लागी महान क्षमता शोर र वातावरण बाट, म कहीं पनी पढ्न सक्छु: म आफैलाई एक बुलबुला मा डुबाउँछु।
दि: अवश्य। यो एक दया (र एक बकवास) हुनेछ कि ऐतिहासिक उपन्यास को एक लेखक को रूप मा उनले अन्य विधाहरु पढ्न सकेनन्। सिंह कालो उपन्यास, के हामी एक साहित्यिक उपन्यास भन्न सक्छौं, अटोफिक्शन, क्लासिक्स कथा र धेरै को निबंध र कथा.
दि: अहिले प्रकोप, नियाल फर्ग्युसन द्वारा नयाँ निबंध; इटालियन, पेरेज- Reverte द्वारा, y कता फर्कनुहोस्एन्टोनियो मुनोज मोलिना द्वारा। मैलेaलेख्न थालेको छु आधुनिक युग मा सेट उपन्यास.
EL: फिर्ता जाँदै २०० in मा शुरू भएको भयानक आर्थिक संकट पछि। कोरोनाभाइरस महामारीको मतलब पुस्तक खरीद सूचकांकमा सुधार हो, जुन प्रकाशन क्षेत्रको लागी राम्रो छ, स्पेनमा, म स्थिर देख्छु। मलाई थाहा छ त्यहाँ छ नयाँ लेखकहरु बीच असन्तुष्टि र जो बन्ने चाहना राख्छन्, किनकि उनीहरु भेट्टाउँछन् प्रकाशित गर्न धेरै कठिनाइहरु, तर सबै समय पहिलो पटक प्रकाशित गर्न गाह्रो भएको छ। के हुन्छ कि अब उनीहरुको उपन्यास प्रकाशित हेर्न चाहनेहरुको संख्या गुणा भएको छ।
दि: यो एक लेखक र शिक्षक को रूप मा मेरो काम को कारण मेरो लागी विशेष गरी गाह्रो हुदैन, मैले प्रचार यात्रा मा एक निश्चित ब्रेक बाट पनि लाभ उठाएको छु, किनकि यसले मलाई धेरै शान्त पढ्न र कुनै बोझ बिना लेख्न अनुमति दिएको छ। र कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति यो बाट साहित्यिक प्रदर्शन प्राप्त गर्न राम्रो छ। यो सबै रचनात्मकता र फोकस मा निर्भर गर्दछ कि लेखक लिन चाहन्छन्। हो साँच्चै, म उपन्यासहरु मा बिल्कुल रुचि छैन कि कोरोनाभाइरस वा महामारी को बारे मा बाहिर आउन सक्छ बितेका युगहरु। कति सानो मौलिकता!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » एमिलियो लारा। सपनाहरु को प्रहरी को लेखक संग साक्षात्कार
डेनियल डेफो। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। केहि टुक्राहरु